Maitiro ekuita kuti Email Campaign Yako Itaridzike Inofadza neBEE? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Kune akati wandei email patani Software inowanikwa mumusika wazvino, asi havasi vese vari kunyatso kukwira. nyuchi inovamba uye inoshanda email dhizaini Software izvo zvinokubatsira kuti ugadzire maemail akanaka uye ehunyanzvi zviri nyore. Bee ndeyemahara, yakapusa, uye intuitive email dhizaini Software izvo zvinoita kuti iwe ugadzire maemail anotaridzika ehunyanzvi mumaminitsi. Iyo 'ese-in-one' email yekugadzira chishandiso chinokutendera iwe kugadzira uye patani maemail pasina kudiwa chero kukodha kana ruzivo rwehunyanzvi. Kana iwe uri wekutanga, saka chishandiso ichi chingori chakakukodzera iwe!
1. Chii chinonzi Nyuchi?
nyuchi ndeye yemahara email kugadzira Software izvo zvinokutendera kuti ugadzire maemail anotaridzika ehunyanzvi, matsamba enhau, uye zvinhu zvekushambadzira. Zviri nyore kushandisa uye zvine zvakawanda zvinotonhorera maficha. nyuchi email kugadzira Software chishandiso chine simba chinokubvumira kuti uite patani uye gadzira maemail anotaridzika ehunyanzvi mumaminitsi. Zviri nyore kushandisa uye zvinoita kuti uwedzere zvinyorwa, mifananidzo, mavhidhiyo, uye zvinongedzo kune yako email. Iine huwandu hwakawanda hwezvinhu zvinoita kuti zvive nyore patani, tumira, uye tevera maemail. Bee email kugadzira Software chishandiso chinokutendera kuti ugadzire maemail anotaridzika zvakanaka pasina chero kukodha unyanzvi. Zviri nyore kushandisa uye zvinouya neanopfuura makumi mashanu matemplate akagadzirira kugadziridzwa. Iyo ine huwandu hwakasiyana hwezvinhu uye sarudzo dzekukubatsira iwe kugadzira iyo yakakwana email yako bhizimisi. nyuchi is Software zvinokubatsira patani email templates. Icho chiri nyore uye chiri nyore kushandisa chishandiso chinokutendera iwe kuti ugadzire inotaridzika-email matemplate mumaminitsi. Bee email kugadzira Software chishandiso chinokubatsira kugadzira yakanaka, inopindura HTML maemail. Zviri nyore kushandisa uye ine toni yezvinhu, senge kugona kugadzira akawanda makoramu uye kuwedzera kumashure mifananidzo. nyuchi iri nyore, iri nyore kushandisa email patani chishandiso chinokubatsira iwe kugadzira yakanaka email mishandirapamwe mumaminitsi. Iyo yese-mu-imwe mhinduro yekugadzira, kutumira, uye kuronda yako email yekushambadzira mishandirapamwe.
2. Mashandisiro ekuita nyuchi?
nyuchi ndiko kudhonza nekudonhedza email kushambadzira Software iyo inokutendera iwe kugadzira uye kutumira maemail akanaka. Zviri nyore kushandisa, uye ndezvemahara. Iyo ine anopfuura mazana mashanu ehunyanzvi email matemplate ekusarudza kubva. Mabhizinesi anogona kushandisa aya matemplate kuita patani mishandirapamwe yavo yeemail maererano nemhando dzinodiwa senge maindasitiri, kushandiswa, uye kushambadzira kushandisa michina. nyuchi inovavarira kuve yakanakisa kudhonza-&-kudonhedza email muvaki wekugadzira famba-maemail anopindura, nekukurumidza uye nyore, chero kupi.
BEE KUSHANDISA ZVIRONGWA
BEE Yemahara: Hapana kusaina kunodiwa. patani email yakanaka ipapo ipapo.
Bee Pro: kukwidziridzwa kubva Mahara. Gadzira, shandira pamwe, Pushira kuESP.
BEE Plugin: Embed BEE kuunza zvinotyisa zvisikwa zveemail mukati mewebhu webhu.
nyuchi inomirira "Yakanakisa Email Edhi". Ndicho chinangwa chekuda isu chatakatara cheichi chirongwa. Yakagadzirwa nerudo rukuru pakati peUnited States neItari, BEE inoshandiswa zvese zviri pamhepo pano pa beefree.io uye yakaiswa mukati memazana emaSawaS mafomu. Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kusaina pa nyuchi kuti utange ipapo iwe unogona nyore patani e-mail mishandirapamwe uchishandisa email matemplate. Rimwe remasimba makuru eBEE mupepeti nderekuti inopa nyanzvi dzekugadzira nehukuru patani kugadzirisa.
Izvi zvinowanikwa nekuparadzanisa pfungwa dzeZvirongwa (izvo zvinoshanda kune meseji yese), Mitsetse (iyo inogona kuwedzerwa, kubviswa, kukopwa, kuchengetwa, uye kutamiswa), uye gutsikana (munhu gutsikana zvidhinha: mifananidzo, zvinyorwa, mabhatani, nezvimwe, izvo zvakare zvinogona kuwedzerwa, kubviswa, kukopwa, uye kutamiswa). Kunze kweizvi, kune raibhurari yezviwanikwa pa Website kwaunogona kuwana rubatsiro rwekugadzirisa iyo email matemplate uye mifananidzo matemplate. Iwe unogona zvakare kuwana rubatsiro rwekuwedzera uye kugadzirisa gutsikana, marongerwo, mapatani ekugadzira, editing meseji nezvimwe. Iwe zvino unokwanisa kudzvanya BEE plugin pane iyo refu kusaina maitiro. Unogona kutanga nayo nyore nyuchi plugin nekutevera aya matanho akareruka:
Kutanga Plugin BEE
nyuchi Plugin application mvumo
Kutanga iyo yekugadzirisa: gadzira, tanga, uye isa
3. Sei Sarudza nyuchi?
Wakambonzwa nezve iyo itsva email dhizaini Software, BeeFree? Icho chishandiso chitsva chinobvumira vashandisi kugadzira maimeri anotaridzika ehunyanzvi uye matsamba enhau kubva pakutanga. Uye yakanaka kwazvo nekuda kweayo anoshamisa maficha. Heano maitiro mashoma e nyuchi izvo zvichakushamisa:
1. Iyo inobatsira zvikuru uye iri nyore kushandisa chirongwa chinokubvumira kuti uite patani uye tumira maemail kune vatengi vako.
2. ichi Software iri nyore kushandisa uye inogona kushandiswa nemunhu wese, zvinoreva kuti kwete kukodha zvinodiwa zvachose. Saka haufanirwe kunetseka nezve tekinoroji maficha sezvo iri nyore kudhonza uye kudonhedza email dhizaini Software.
3. Iyo zvakare inodhura-inoshanda, saka iri sarudzo huru kumabhizimusi madiki.
4. Inobata vatengi nekukurumidza uye inogadzirisa nyaya dzakadai sekusiiwa kwe shopper carts, yakakwira bounce mitengo, uye zvakajairika vatengi kusagadzikana.
5. nyuchi email kugadzira Software inzira yakanaka yekuwana yako bhizimisi kubva pasi. Icho chimwe chezvishandiso zvakanakisa kutumira maemail akawanda.
4. Maitiro Ekugadzira Email neNyuchi?
Kugadzira email ne nyuchi, unofanirwa kutevedzera nhanho idzi:
Iwe unogona kugadzira akawanda emahara matemplate kubva kune yakakurumbira maemail zvinoshandiswa seMailchimp, ConvertKit, Gmail Generator, etc. Email templates anogona kukubatsira kunze kwekunge iwe uchida kutora zvinhu zvishoma. Kana iwe ukatora zvese kamwechete, zvino izvo zvingave zvakanyanya uye kure nekunobatsira. Chekutanga, dhawunirodha kana tsvaga email yeanopa email yako patani chishandiso uye rodha yako yaunoda template. Wobva wasarudza iyo font uye color scheme yaunoda. Pakupedzisira, regai Software gadzira iyo email uye wozoichengeta seyakanamatira. Saizvozvo. Unogona kusarudza chero email fomati, gadzira musoro, tsoka, uye gutsikana bold, italic, underline, etc, uye gadzirisa mavara ako ese kuti averengeke nyore. Chekupedzisira, iwe unogona kuwedzera chero email zvakabatanidzwa senge zvinyorwa zvakaongororwa, pdfs, uye mifananidzo.
Sewekutanga, iwe zvechokwadi haudi kuisa nguva yakawanda mukunakisa maemail ako, uye iyi yemahara email chishandiso inokutendera kuti uzviite nekukurumidza. Paunenge uchinge uine madhizaini ako, unogona kutumira kune mamwe maapplication akadai seInline kana Microsoft Shoko. Kana kuti wedzera mifananidzo yako uye mavara akasarudzwa muzvimiro zvako uye wotumira maemail ako. Zvese zvaunoda inguva shoma! Semubatsiri wakawedzerwa, unogona kutanga kugamuchira maemail kubva kune vatengi vako zvakananga muNotion yekubatana nyore pasina imwezve kukodha! Kana iwe uchikanganiswa nechero email hutsotsi hutsotsi, saka ungangoda kuziva nezve mashoma mashoma emahara maturusi akabatsira mabhizinesi munguva yakapfuura. Kana iwe uchifambisa yako yese bhizimisi online ipapo inhau dzakanaka kuti iwe utange kugamuchira maemail. Sei usingatange kugamuchira maemail kune yako online bhizimisi uye kana iwe uchida kukurumidza kugadzira maemail anotaridzika ehunyanzvi saka pane chishandiso cheizvozvo. With BEE unogona kugadzira maemail anotaridzika nezvehunyanzvi ayo ari nyore kutumira uye ari nyore kuverenga.
????????Usatenge Kunze Kunze kwekunge usati Wagadzirira Kubudirira????????